Mpitantana sarimihetsika Espaniola, iza no malaza indrindra? | Omeo fialamboly aho
Talen'ny sarimihetsika Espaniola
Ny sinema dia iray amin'ny zavakanto malaza indrindra eran'izao tontolo izao, izay tsy nisy raha tsy nisy tetika mahaliana. Na izany aza, Na dia manana tantara miavaka amin'ny fahaiza-manao lehibe aza isika, dia tsy hisy zavatra hitranga raha tsy misy ny asa lehibe tsy maintsy ataon'ny tale. Ny asan'ny talen'ny sarimihetsika dia ny mitarika ny fandraisam-peo ary manao azy ho blockbuster. Manana talenta be ny sinema Espaniôla ary androany dia hilazako kely aminao ny tantaran'ny talen'ny horonantsary Espaniola lehibe ananantsika anio.
Ny iray amin'ireo lahasa lehibe ataon'ny tale dia ny manao kely ny zava-drehetra! Raha tsorina dia tompon'andraikitra amin'ny fanatanterahana sy famolavolana ny tantara amin'ny fomba marina mifandraika amin'ny mpihaino. Ilay tarehimarika no mandray ny fanapaha-kevitra lehibe, ohatra: ny fanatanterahana script, ny fisafidianana ny feon-kira, ny fanomezana torolàlana an'ireo mpilalao sarimihetsika, ny fanaraha-maso ny tifitra isaky ny seho sy ny zoro an'ireo fakantsary mandritra ny fitifirana. SAINGY manome ny fahitany manokana indrindra ny amin'ny fomba tsy maintsy hilazana ireo tantara miaraka amin'ireo lafin-javatra ilaina toy ny famaritana ny fomban'ny tontolo iainana. Ireto ambany ireto dia asehoko ireo talen'ny horonantsary espaniola eken'ny ekipa fanta-daza indrindra mba tsy hanadino ny sarimihetsika nataon'izy ireo.
4 Ary ny sisa amin'ny talen'ny horonantsary Espaniola?
Heverina ho toy ny iray amin'ireo talen'ny fakana fahefana indrindra ivelan'ny tanindrazany tao anatin'ny folo taona lasa. Teraka tao Calzada de Calatrava izy tamin'ny 1949 tao amin'ny fianakaviana muleteers. Voahodidin'ny vehivavy manodidina azy foana izy, izay loharano mitaona aingam-panahy ho an'ny asany. Tamin'ny faha-1984 taonany dia nifindra tany an-tanànan'i Madrid izy hianatra sinema; na izany aza, vao nikatona ny sekoly. Ity hetsika ity dia tsy nahatonga sakana tamin'i Almodovar hanomboka hanamboatra ny lalany. Niditra vondrona teatra izy ary nanomboka nanoratra ny tantarany manokana. Tamin'ny XNUMX vao nanomboka nampahafantatra ny tenany tamin'ny alàlan'ny horonantsary Inona no nataoko mba mendrika an'izany?
Ny fombany dia manimba ny fomba bourgeois espaniola satria izy no misolo tena ny zava-misy amin'ny sangan'asany izay sarotra indraindray ny mandray an-tanana ny toe-javatra misy fanilikilihana ara-tsosialy. Miresaka lohahevitra tena mampiady hevitra toy ny: zava-mahadomelina, zaza tsy ampy taona, firaisan'ny samy lehilahy na samy vehivavy, fivarotan-tena ary fanararaotana. Na izany aza tsy manao an-tsirambina velively ny azy izy vazivazy mainty sy tsy misy fanajana. Noheveriny ho mpilalao sarimihetsika tiany indrindra ireo mpilalao sarimihetsika Carmen Maura sy Penelope Cruz.
Anisan'ireo sanganasa lehibe hitany:
Ny zava-drehetra momba ny reniko
Ilay hoditra honenako
Ny vonin'ny tsiambarateloko
Izy no nandresy tamin'ny Oscars roa: tamin'ny 1999 noho ny "All about my mother" ary tamin'ny 2002 ho an'ny script "Miresaka aminy". Ho fanampin'izay, nahazo loka Golden Globes, mari-pankasitrahana BAFTA, Goya Award ary tamin'ny Cannes Festival izy. Zava-dehibe ny manasongadina fa ankoatry ny maha iray amin'ireo talen'ny sarimihetsika Espaniola tsara indrindra; Mpanamboatra sy mpanoratra horonantsary mahomby ihany koa izy.
Miaraka amin'ny renim-pianakaviana teraka Espaniôla sy raim-pianakaviana Shiliana, dia mahita zom-pirenena roa amin'ity mpitantana ity izay tantaniny amin'izao fotoana izao. Teraka tamin'ny 31 martsa 1972 tao Santiago de Chile izy ary ny taona manaraka dia nanapa-kevitra ny hifindra tany Madrid ny fianakaviana. Ny fahaizany mamorona dia nanomboka nitombo hatramin'ny fahazazany indrindra rehefa naneho zavatra tsara izy finaritra amin'ny fanoratana sy famakiana, ary koa ny famoronana lohahevitra mozika. Izy dia raisina ho iray amin'ireo talen'ny talenta, mpanoratra an-tsarimihetsika ary mpamoron-kira fahombiazana tamin'ny androntsika tamin'ny kanto fahafito.
ny Ny sanganasa voalohany nataon'i Amenábar dia sarimihetsika fohy efatra navoaka teo anelanelan'ny 1991 sy 1995. Nanomboka nalaza izy tamin'ny taona 1996 tamin'ny famokarana "Tesis", mpientam-po iray izay nisarika ny saina mitsikera amin'ny Fetiben'ny Sarimihetsika Berlin ary nahazo loka Goya fito. Tamin'ny taona 1997 dia namolavola "Abre los ojos" izy, sarimihetsika foronina siansa izay nanenika ny fetin'i Tokyo sy Berlin. Ny drafitra dia namela ilay mpilalao sarimihetsika amerikana Tom Cruise tena nahagaga fa nanapa-kevitra ny handray ny zony hanao adaptation izy izay navoaka tamin'ny 2001 teo ambanin'ny titre "Vanilla Sky."
Ny famokarana fahatelo an'ny talen'ny ekipa misy ny resonans lehibe dia ilay sarimihetsika malaza "The Other", kintana Nicole Kidman. ary navoaka tao amin'ny teatra tamin'ny taona 2001. Nahazo naoty ambony sy famerenana tena tsara; Izy io koa dia napetraka ho sarimihetsika fandinihana faran'izay betsaka nijery ny taona tany Espana.
Iray amin'ireo sarimihetsika nampiavaka azy farany izay niarahany niasa ho talen'ny taona 2015, mitondra ny lohateny hoe "Regression", izay nilalao an'i Emma Watson sy Ethan Hawke.
Misy anaram-boninahitra hafa noraisiny ho talen'ny famoronana, mpamoron-kira, mpamoron-kira na mpilalao sarimihetsika toy izao:
Ny faharatsian'ny hafa
Ny lelan'ny lolo
Tsy misy mahalala olona
Amenábar dia manana loka Oscar amin'ny tantarany, ankoatry ny loka Goya marobe.
Teraka tamin'ny taona 1945 tao an-tanànan'i Barcelona izy, manan-drahalahy kambana ary avy amin'ny fianakaviana manetry tena. ahonanomboka ny asany matihanina tamin'ny faha-20 taonany tamin'ny fanaovana dokambarotra sy clip video an'ny tarika mozika sasany. Manaiky an'i Guillermo del Toro ho mpitaiza azy i Bayona ary nihaona taminy nandritra ny Fetiben'ny sarimihetsika Sitges tamin'ny taona 1993.
Ao amin'ny 2004, ilay mpanoratra ny sarimihetsika «The Orphanage» dia nanolotra an'i Bayonne ilay script. Rehefa nahita ny filana mampiakatra avo roa heny ny teti-bola sy ny faharetan'ilay sarimihetsika, dia nangataka ny fanampian'ny Guillermo del Toro izay manolo-tena hamokatra ilay horonantsary izay navoaka telo taona taty aoriana tao amin'ny festival Cannes. Naharitra efa ho folo minitra ny fihobiana nataon'ny mpijery!
Ny sanganasa iray hafa misy ifandraisany indrindra amin'ny tantara dia mifanandrify amin'ny tantara «The Impossible» mpilalao an'i Wat Watts ary navoaka tamin'ny taona 2012. Ny tantara dia mitantara tantaram-pianakaviana iray sy ny zava-doza nitranga nandritra ny tsunami tamin'ny ranomasimbe Indiana 2004. Ilay sarimihetsika dia nahavita nametraka ny tenany ho premiere voalohany nahomby indrindra tany Espana hatreto, nahazo 8.6 tapitrisa dolara nandritra ny faran'ny herinandro fanokafana.
Ho fanampin'izany, amin'ny taona 2016 ilay sarimihetsika "A monster come to see me" premiered in Spain. Ny tsy ampoizina lehibe dia tonga rehefa ilay tale malaza Steven Spielberg dia nifidy an'i Bayona hitarika ny fizarana farany an'ny World Jurassic amin'ny taona 2018: "The Fallen Kingdom."
Ary ny sisa amin'ny talen'ny horonantsary Espaniola?
Tsy isalasalana fa betsaka ny mpanakanto mirongatra. Mahita mpampita toa anay izahay Icíar Bollaín, Daniel Monzón, Fernando Trueba, Daniel Sanchez Arévalo, Mario Camus ary Alberto Rodríguez izay tsy tokony hohadinointsika. Ny asany dia manomboka mahazo anarana ao anatin'ny indostria miaraka amin'ny tolo-keviny.
Miankina amin'ny teti-bola ny talen'ny sarimihetsika, ankoatry ny fameperana sasany ataon'ny mpamorona ny tantara. Saingy ny asany no fototry ny asa sinemaografika rehetra. Zavakanto tena izy ny mandika tsara sy mampifanaraka ny hevitry ny olon-kafa mba hampitana azy ireo amin'ny mpihaino marobe ary hamadika azy ireo ho fahombiazana!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Omeo fialamboly aho » General » Talen'ny sarimihetsika Espaniola
Ny andian-tantaram-pitiavana tsara indrindra